Maraykanka oo ku baaqay in lakala diro Malayshiyaadka Shiicada ah ee Ciraaq - BBC News Somali
Maraykanka oo ku baaqay in lakala diro Malayshiyaadka Shiicada ah ee Ciraaq
Image caption Dagaalamayaasha PMU ayaa qayb ka ahaa dadaalkii ay dawladda Ciraaq dib ugula wareegtay Kirkuk
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa ku baaqay in ay guryahooda kala aadaan Malayshiyaadka ay Iiraan taageerto ee dagaalka kula jiray kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ee dalka Ciraaq ku sugan, iyadoo dagaalku uu gabogabo ku sii dhawyahay.
Tillerson ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan ajaaniibtu ay baxaan Ciraaqiyiintana loo ogolaado in ay dalkooda dib u dhistaan.
Wuxuu hadalkaas jeediyay intii uu booqashada ku joogay Sacuudi Carabiya, safarkaas oo ujeedadiisu ahaa yaraynta galaangalka ay Iiraan ku leedahay Gobolka.
Safarkan ayaa dabo socday baaqii madaxweyne Trump ee ku saabsanaa in laga hortago sida ay wax u waddo Iiraan.
Maraykanka iyo dalalka xulafada la ah ayaa la dagaalamayay hal cadaw inkastoo ay Iiraanna dhankeeda kaga jirtay isla dagaalkaas, inkastoo Maraykanku uu ka soo horjeeday joogitaankooda.
Ciidammada Ciraaq oo taageero ka helaya kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka iyaga oo ay ka garab dagaalamayeen isbahaysiga PMU loo soo gaabiyo oo badankood ah malayshiyo Shiico ah kuwaas oo badankood taageero iyo maalgalinba ka hela Iiraan.
Image caption Rex Tillerson
Qaar ka mid ah PMU ayaa lagu eedeeyay tacaddiyo ka dhan ah Shacabka Suniyiinta ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin dil iyo jir dil, arrintaas ayaa la sheegay in ay dhacday intii ay socdeen weerarradii hore ee deegaannada Ciraaaq lagaga qabsanayay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka.
Trump: Ma haboona in Maraykanka laga nukliyeer bataa
Tirada dadka dilka lagu fuliyo ee adduunka oo hoos u dhacday
'Yaan hub laga iibinin dalalka Khaliijka khilaafka Qadar awgii'
Malayshiyada PMU ayaa sidoo kale toddobaadkii hore ku luglahaa la wareegitaankii ay Dawladda Ciraaq dib ugu qabsatay deegaanno badan oo ay Kurdiyiintu gacanta ku hayeen tan iyo 2014kii, markaas ciidammada Ciraaq ay burbureen.
Tillerson ayaa doonaya in Shiicada malayshiyadaas ku jirta ay ciidammada Ciraaq ku biiraan ama hubka dhigaan, sida uu BBC-da u sheegay masuul Maraykan ah. Masuulkaasi wuxuu intaas ku sii daray in Iiraaniyiinta taageerada u yimidna ay dalka isaga baxaan.